Baro bilaash ah, Xanjo & Lozenges - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo » Hel Caawinaad Joojinta » Baro bilaash ah, Xanjo & Lozenges
LACAG LA'AAN, XANUUN & LOZENGES
Isku day kasta oo la joojiyo waa fursad lagu ogaado waxa adiga kuu fiican. Haddii aad iskaa u joojiso ama aad la shaqeysid Tababaraha Joojinta, adoo isticmaalaya daawooyinka joojinta, oo sidoo kale loo yaqaan daaweynta nikotiinta (NRT), waxay kordhineysaa fursadahaaga inaad si guul leh u joojiso. Xaqiiqdii, fursadahaaga joojinta ayaa si weyn u kordhay markaad:
Isku dar dawooyinka iska joojinta caawinaad joojinta tababarka khaaska ah ee a Partner Jooji Vermont or Ka jooji taleefoonka
Isku dar daaweynta beddelka nikotiinka adoo isticmaalaya 2 nooc oo ah daawada joojinta isla waqtigaas. Isku darka waxqabadka muddada dheer (balastarka) iyo dhaq-dhaqaaqa (ciridka ama lozenge) daaweynta nikotiinta ayaa lagu dhiirigelinayaa suurtagalnimada in la iska daayo. Wax ka baro Isugeynta Daawooyinka Jooji hoos.
Haddii aadan ku guuleysan hal waddo oo hore, waxaad ku fiicnaan kartaa isku dayga mid kale.
Booqo bogga internetka ee 802Quit si aad u dalbato balastar nikotiin ah, xanjo & lozenges>
Baro wax badan oo ku saabsan daaweynta beddelka nikotiinka ee joojiya daawooyinka iyo xulashooyinka kale ee sida loo helo>
Macluumaad ku saabsan Bilaashka nikotiinka, Cirridka & Lozenges iyo Daawooyinka Kale ee Jooji
Qoyska ugu badan ee la isticmaalo dawooyinka la joojiyo waa daaweynta nikotiinta lagu beddelo, sida balastarrada, xanjada iyo lozenges. 802Quits waxay siisaa BILAASH dadka isku dayaya inay joojiyaan tubaakada waxayna toos ugu keenaan gurigaaga. Daawooyinka lacag la’aanta ah waxay ku yimaadaan 10 maalmood gudahood markii la dalbado. Waxaad heli kartaa balastar nikotiin oo bilaash ah kahor maalinta aad joojineyso illaa iyo intaad haysato taariikhda joojinta 30 maalmood gudahood kahor intaadan isqorin inaad hesho adeegyada.
Waxa intaa dheer in lagu dalbado balastar nikotiin ah, xanjo iyo lozenges bilaash ah laga bilaabo 802Quits, bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa kuu qori kara noocyo kale oo ah daawooyinka la joojiyo. Marka daawooyinka la isla isticmaalo, waxay kaa caawin kartaa inaad joojiso oo aad joogteyso guusha. La hadal adeeg bixiyahaaga.
Noocyada Daawada Joojinta
Haddii aad isku dayday hal waddo oo hore oo ay shaqeyn weyday, tixgeli inaad isku daydo mid kale oo kaa caawinaya inaad joojiso sigaar cabista ama tubaakada kale.
Waxaa laga yaabaa inaad su'aalo ka qabtid daawooyinka joojinta. Macluumaadka ku jira qaybtaan ayaa kaa caawin doona inaad fahamto waxyaabaha kaa caawinaya inaad joojiso sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah ama waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo.
Daaweynta Nicotine Beddelka Daawooyinka
Dhig maqaarka. Ku habboon gargaarka fog ee muddada dheer Si tartiib tartiib ah ayey nikotiinta ugu sii deysaa socodka dhiiggaaga. Magaca caanka ah ee caanka ah waa balastar Nicoderm®.
Calaji si aad u siidayso nikotiinta. Hab waxtar leh oo lagu yareeyo damacyada. Kuu ogolaanayaa inaad xakamayso qiyaastaada. Magaca caanka ah ee caanka ah waa ciridka Nicorette®.
La geliyey afka sida nacnac adag. Meelaha nikotiinka ahi waxay bixiyaan isla faa'iidooyinka xanjada iyadoon la calalin.
Haddii aad rabto inaad ku joojiso nikotiin dhejis ah iyo xanjo ama lozenges, waxaa jira 3 ikhtiyaar oo ku saabsan sida loo helo, inta aad hesho iyo waxa ku kacaya:
1.Isku qor 802Quits oo hel inta u dhexeysa 2 iyo 8 toddobaad oo ah BILAASH nikotiin BILAASH ah, Xannibo PLUS ama lozenges Wax dheeri ah baro.
2.Haddii aad haysato Medicaid iyo warqad dhakhtar qoro, waxaad heli kartaa noocyo aan xadidnayn oo ah nikotiin dhejis ah iyo xanjo ama lozenges ama illaa iyo 16 toddobaad oo ah noocyo aan la doorbidin oo aan qiimo kuugu fadhiyin. Weydii dhakhtarkaaga wixii faahfaahin ah.
3.Haddii aad leedahay caymis caafimaad oo kale waxaad heli kartaa NRT bilaash ah ama laga dhimay oo rijeeto ah. Weydii dhakhtarkaaga wixii faahfaahin ah.
Daawooyinka Kaliya Daawada Daawada Daawada
Kartoor ku xiran qalabka afka. Neefsashada waxay sii deysaa qadar cayiman oo nikotiin ah.
Waxay kaa caawin kartaa yaraynta damaca iyo astaamaha ka bixitaanka, sida walaaca iyo xanaaqa. Waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu darayo alaabada daaweynta nikotiinta sida balastarrada, xanjada iyo lozenges.
Dhalada Bamga ku shubo nikotiinka. Si la mid ah qalabka neefta lagu buufiyo, buufinta ayaa sii deysa qadar cayiman oo nikotiin ah.
Waxay yareysaa darnaanta rabitaanka iyo astaamaha ka bixitaanka — kuma jiraan nikotiin. Waxay yareysaa dareenka farxadda tubaakada. Waa inaan lagu darin daawooyinka kale. Haddii aad daawo ugu jirto niyad jab iyo / ama walaac, la tasho dhakhtarkaaga.
Waxyaabaha kor ku xusan waxaa lagu heli karaa warqad dhakhtar oo keliya. Ka hubi farmasigaaga wixii ku saabsan macluumaadka kharashka. Medicaid waxay dabooshaa ilaa 24 toddobaad Zyban® iyo Chantix®.
Dhibaatooyin ayaa ka imaan kara daawooyinka la joojiyo. Dhibaatooyinka soo raaca waxay ku kala duwanaan doonaan qof ilaa qof. Si kastaba ha noqotee, dad aad u yar (in ka yar 5%) waa inay joojiyaan isticmaalka daawooyinka iska joojinta sababo la xiriira dhibaatooyinka soo raaca.
Isku Darka Daawooyinka Jooji
Ma isweydiineysaa sida daawadu kaaga caawin karto inaad joojiso sigaar cabidda, uus-uus ama tubaako kale? Ma tixgelinaysaa balastarka nikotiinka iyo lozenges iyo ciridka? Marka la barbardhigo tagista turkeyga qabow, isticmaalka balastarrada, xanjada iyo lozenges-ka waxay si weyn u kordhin kartaa fursadahaaga inaad si guul leh uga tagto tubaakada. Laakiin waad sii xoojin kartaa dhibaatooyinkaaga xitaa adoo isku daraya daaweynta nikotiinta, sida qashin-qaadashada muddada dheer leh ciridka ama lozenges, kuwaas oo si dhakhso leh u shaqeynaya. Taas macnaheedu waxa weeye waad wada isticmaali kartaa xanjada nikotiinta iyo balastarrada, ama waad wada isticmaali kartaa lozenges-ka iyo nikotiin wadareed.
Sababta Balastarku wuxuu keenayaa nikotiin qulqulaya oo joogto ah 24 saacadood, sidaa darteed waxaad helaysaa waxqabad dheer, gargaar isdaba joog ah oo ka imanaya astaamaha ka-noqoshada, sida madax-xanuun iyo xanaaq. Dhanka kale, ciridka ama lozenge wuxuu ku bixiyaa qadar yar oo nikotiin ah 15 daqiiqo gudahood, kaa caawinaya inaad maareyso xaaladaha adag iyo inaad mashquuliso afkaaga markaad kaxeyso damacyada.
Marka la wada isticmaalo, balastarka iyo ciridka ama lozenge-ka ayaa ka bixin kara ka fiicnaan badan hamiga nikotiinka marka loo eego kaligood.
Waxay u egtahay inaad la kulmi doontid astaamaha ka-noqoshada isla marka aad tubaakada joojiso. Calaamadahaani waa kuwa ugu xooga badan labada usbuuc ee ugu horeeya markaad sigaarka joojiso waana inay dhaqso u baxaan. Calaamadaha bixitaanku way u kala duwan yihiin qof walba. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Dareemis ama murugo
Dareemid xanaaq, xanaaq ama gees-gees
Dhibaato fekerka si cad ama xoog saarista
Dareen degganaansho la'aan iyo boodbood
Qiyaasta garaaca wadnaha
Gaajo kordhay ama miisaanka oo kordhay
Ma U Baahan Tahay Caawinta Joojinta?
802Quits waxay bixisaa seddex qaab oo kaa caawinaya inaad sigaarka u joojiso bilaash: Taleefan ahaan, Qof ahaan iyo khadka tooska ah.
Caawinaad Joojin Bilaash ah>